आज बौ`द्ध, जोरपाटी तथा नारायणटारका पसल खुले !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lockdown News/आज बौ`द्ध, जोरपाटी तथा नारायणटारका पसल खुले !!
आय आर्जनको बाटो रोकिएको र परिवार पाल्नसमेत मु श्किल परेको जनाउँदै ती स्थानका व्यवसायीले पसल खोल्न थालेका हुन् । कर, घरभाडा, बैंकको किस्ता र कर्मचारीको तलब भुक्तानी गर्न समस्या भएकाले पसल खुल्ला गरेको नाराय णटारका व्यापारी सुनिल सापकोटाले बताउनु भयो ।
बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्न नसक्दा दिनदिनै ऋणको भार थपिँदै गएको तथा परिवार समेत भोकै पर्ने अवस्था आएपछि पसल खोल्न बाध्य भएको व्यवसायीको भनाइ छ । अहिले सो क्षेत्रमा कपडा, जुत्ताचप्पल, बिजुली, हार्ड वेयर ल गायत पसल खुलेका छन् ।